Archive du 20180917
Marc Ravalomanana « Mahatoky anareo aho, 1er Tour dia vita ! »
Efatra taona izao i Marc Ravalomanana no tafaverina an-tanindrazana ary efa nitety faritra maro nijery sy nihaino ny tarainan’ny Malagasy izay maro no tena sahirana. Tonga ity ny fotoana, kandida ofisialy i Marc Ravalomanana amin’ny 7 novambra tonga dia vitantsika « 1er tour » io, hoy izy tany Antsirabe ny andron’ny sabotsy lasa teo.
Omega Mahasoratse na Solofon’i Davida “Mpanjaka no tokony hitondra eto.”
Azo porofoina sy tsapain-tanana, hoy ny lehilahy iray nilaza ho voahosotr’Andriamanitra, Omega Mahasoratse na Solofon’i Davida, fa tsy misy ho avy i Madagasikara.
Fifidianana filoham-pirenena Miditra an-tsehatra ny Rosianina
Nahalasa saina ny vaovao navoakan’ny gazety La lettre de l’Ocean Indien izay nilaza fa efa am-polony mahery amin’ireo kandida 36 hilatsaka ho filoham-pirenena eto amintsika no efa noresahan’ny rosianina.
Doudou DFP Antony 3 no mety hampihemotra ny fifidianana
Antony 3 na zavatra 1 amin’ireto 3 ireto ihany no mety hampihemotra ny fifidianana, hoy ny filohan’ny vovonana politika Dinika fanavotam-pirenena na DFP, Tolojanahary Maharavo.
Fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana Mampaneno lakolosy ny CENI
Tsy azo atao mihitsy ny manao fampielezan-kevitra mialoha ny daty voatondro araka ny lalàna mifehy ny fifidianana. Amin’ny 8 oktobra no manomboka ny propagandy ho an’ny fifidianana filoham-pirenena saingy hita taratra anefa fa maro ireo kandidà mihoa-pefy manatanteraka fampielezan-kevitra amin’izao fotoana.
Rolland Ratsiraka “Tsy handroso i Madagasikara raha mbola manafatra vary”
Nanambara ny kandida nilatsaka ho filoham-pirenena Rolland Ratsiraka nandritra ny fitsidihany ny tsenabe iraisam-pirenena ara-pamokarana andiany faharoa tetsy amin’ny Zone Forello Tanjombato fa tena mbola maro ny olana sedrain’ny mpamboly sy mpiompy Malagasy.
Famotsiam-bola Tsy mbola mazava amin’ny ankamaroan’ny Malagasy
Betsaka ny Malagasy tsy mbola mahafantatra ny momba ny famotsiam-bola.
Fandrahonana ireo mpianatra nitsikera an-dRajoelina Nivoaka tamin’ny fahanginany ireo ray aman-dreny
Miteraka resabe hatramin’izao ny sarin’ireo mpianatra sy avara-pianarana sahy nitsikera sy nanakana ny hanatontosan’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina,
Ahoana moa no hifidianako an`ise F`izay jerena ity toa tena mahafanina ? Lasa diman-jato indray izao ny frais, Kanefa maro no efa tsy mihinan-kanina.
Tsipy kanetibe tompondaka eran-tany 2018 Raraka teo amin’ny 1/8-ndalana i Madagasikara
Tafakatra niatrika ny manasa-dalana nifanandrina tamin’ilay Marokanina Hicham Boulassal i Taratra Rakotoninosy solontena Malagasy tamin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny “Tir de preçision”
Rugby iraisam-pirenena tetsy Mahamasina Lavon’ny Makis Junior 39-35 ny Oxford University Angleterre
Tafiditra ao anatin’ireo firenena handalovany hanatanterahana ny hetsika “Tour Rugbystique d’OXFORD University RFC” ity oniversite any Angleterre ity ka lalao 2 no voafaritra hotanterahiny eto amintsika dia lalao sedra notanterahina omaly 16 septambra tetsy Mahamasina
Poule des As 2018 Lavon’ny Elgeco Plus tao an-kianjany ny Fosa Juniors
Raha tsy afa-bela tamin’ny CNaPS Sport Itasy ny Fcv Vakinankaratra fa resiny 2-0 indray tao amin’ny Velodrome Antsirabe omaly alahady 16 septambra teo amin’ny andro faha-5 amin’ny « Poule des As 2018 »
Ady totohondry Malagasy Aoka izay ny fanakorontanana, hoy ireo ligim-paritra
Tsy anjaran’ny filohan’ny federasion’ny ady totohondry Malagasy am-perinasa, Rabarisosa Herimamy, hoy ireo filohana ligim-paritry ny ady totohondry eto
Miha mandroso lalina any amin’ny fifidianana ihany isika amin’izao. Samy mametrapetraka ny paikadiny ny kandida tsirairay avy,
Faran’ny herinandro Sesilany ny lozam-pifamoivoizana
Nirarakopana ny lozam-pifamoivoizana tamina toerana samihafa sy tany amin’ny lalàm-pirenena ho an’iny faran’ny herinandro iny, izay tsy latsaky ny 5 raha ho an’ny omaly fotsiny.
Aretina Alzheimer Olana iray isaky ny 3 segondra no voany maneran-tany
Tafiditra ao anatin’ny iray volan’ny aretina « Alzheimer » isika amin’izao. Aretina tsy dia fantatry ny Malagasy izy io saingy efa maro ireo olona voa.
Foloalindahy Malagasy Tsy voahaja tsara intsony ny fitsipi-pifehezana
Efa tsy voahaja intsony ny fitsipi-pifehezana ao amin’ny foloalindahy, raha tarafina amin’ny zava-misy amin’izao fotoana.
Tsy misy hevitra azo ihodivirana intsony ny fiakaran'ny vidin-tsolika, hoy ny OMH.
TSY MAHARESY LAHATRA
HERY RAJAONARIMAMPIANINA MIVADY
Raha ny vaovao azo ny faran’ny herinandro teo, dia lasa any ampitandranomasina ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina mivady.
« La Réunion kely » Ampefiloha Trano 14 may kilan’ny afo
Trano 14 no may kilan’ny afo tetsy « La Réunion kely » Ampefiloha ny alahady vao mangiran-dratsy tokony ho tamin’ny 3 ora. Tsy nisy ny aina nafoy.
Voka-bary Tsy mbola mahenika ny Malagasy
Nihatsara ny voka-barin’i Madagasikara tamin’ity taona 2018 ity raha oharina ny taona 2017. Nahitana fitomboana 30% satria nahatratra 4 030 000 taonina ny akotry raha 3 100 000 taonina tamin’ny taon-dasa. Nanambara ny minisitry ny fambolena sy fiompiana,